इन्स्टाबाटै करोडौँ कमाइ ! « Drishti News – Nepalese News Portal
इन्स्टाबाटै करोडौँ कमाइ !
९ श्रावण २०७६, बिहिबार 1:17 pm
काठमाडौ, ९ साउन । शोसल मिडिया इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्टबाटै करोडौंँ कमाइ ! सुन्दा पत्यारै नलाग्ला । तर, पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको शोसल मिडिया इन्स्टामा एउटै तस्बिर पोस्ट गरेवापत करोडौँ कमाउँने सेलिब्रिटी पनि छन् । जसलाई पत्याउनै पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक एक रिपोर्टअनुसार बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले इन्स्टामा ब्रान्डको प्रमोशन गरेबापत करोडौँ रकम कमाउने गरेकी छन् । हालैमात्र सार्वजनिक भएको इन्स्टाग्रामको सेड्युलिङ टुल ‘होप्पर एचक्यू’को सुचीमा उक्त कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा, अभिनेत्री चोपडा १९औँं स्थानमा छिन् ।
यी बलिउड अभिनेत्रीलाई इन्स्टामा फलो गर्नेको संख्या ४ करोड ३० लाखभन्दा बढी छन् । सार्वजनिक रिपोर्टका अनुसार चोपडाले एउटा ब्राण्डको विज्ञापन गरेवापत २ लाख ७१ हजार डलर लिँदै आएकी छन् ।
यस्तै, उक्त सूचीमा अमेरिकाका गायक कायनी जेनर पहिलो स्थानमा छन् । जेनरले एउटा पोष्टका लागि १२ लाख ६६ हजार डलर लिने गरेका छन् । उनको इन्स्टामा १३ करोडभन्दा बढी फलोअर्स छन् । अभिनेत्रीको प्रियंका चोपडाको फ्यान विश्वभर छन् । यही कारणले गर्दा उनी ब्रान्ड प्रमोशनमा महँगो भएकी हुन् ।